वीरगञ्जकी उपमेयर ९१ वर्षीया शान्ति कार्कीले जि’तिन् कोरोना
Homeसमाचारवीरगञ्जकी उपमेयर ९१ वर्षीया शान्ति कार्कीले जि’तिन् कोरोना
May 20, 2021 admin समाचार 4690
कोरोना संक्र’मित वृद्धवृद्धालाई ब’चाउन गाह्रो हुन्छ भन्ने आम धारणालाई वीरगञ्ज उपमहानगरपालिका उप’प्रमुख सुश्री शान्ति कार्की (९१) ले गलत सावित गरिदिएकी छन् । कोरोनालाई परास्त गर्दै कार्की अस्पतालबाट घर फ’र्किएकी छन् ।
हिन्दू धर्ममा मृ’त्यु अगाडि गरिने दश दान कर्म पूरा गर्ने भनेर सामान समेत जोहो गरिस’केकी थिइन् उनले । ‘१० दान गराउने सामान बोकेर गएकी थिएँ । सामान फ’र्काएर ल्याउनुपर्‍यो,’ उनले हाँस्दै भनिन्, ‘खाली नाम र गोत्र दिएर ल दान गर्दि’नुस् भन्थें । पण्डित नै पाइन र पो त !’
नयाँ भेरियन्ट सहितको कोरोना संक्र’मणको दोस्रो लहर आ’क्रामक देखिएको परिस्थितिमा ९१ वर्षीया संक्रमि’तले कोरोना जित्नु चा’नचुने कुरा थिएन । त्यसैले उनलाई बधाई सन्देशसहितका फोन रिसिभ गर्न भ्याइनभ्याइ छ । उनी भन्छिन्, ‘कोरोनाले भन्दा मो’बाइलले पो हैरान पार्‍यो ।’
कार्की अवि’वाहित छिन् । आफ्नो घर नभए’काले अरुको घरमा बस्छिन् । महानगरपालिकाले दिएको सुविधाको गाडी न’चढेर उनी प्रायः पैदलै हिंडेको देखिन्छ । चिनेजा’नेका प्रायः सबैले उनलाई ‘शान्ति दिदी’ भनेर बोलाउँछन् ।
कोरोनाको हटस्पट वीरगञ्जमा भौ’तिक दुरी कायम गर्न जनप्रतिनिधिलाई गाह्रो छ । जनप्रति’निधिलाई देखे भने स्थानीयले आफ्ना सम’स्या र गुना’सा सुनाउन घेरिहाल्छन् । कसैले बोलाएको ठाउँमा गइदिने, उनीहरुका समस्या सुनिदिने र समा’धानको पहल गर्ने काम गर्दागर्दै उनी संक्रमित भइन् । ‘भिडभाडमा जान्न भनेर सुखै हुँदैन, वैशाख २२ गते पीसीआर परीक्षण गर्दा रि’पोर्ट पोजेटिभ आयो,’ उनले सुनाइन् ।
महानगरपालिकाले आइसोलेसन सञ्चालनमा ल्याइसकेको थिएन, अस्पतालमा गम्भी’र प्रकृतिका बिरामी मात्रै भर्ना गरिन्थ्यो । त्यसैले उनी दुई दिन होम आइसोलेसनमै बसिन् । नगरपालिकाले गोपालमण्डली धर्मशालामा १ सय बेडको कोरो’ना अस्पताल र १ सय बेडको आइसोलेसन तयार पार्‍यो । वैशाख २४ गते उद्घाटनकै दिन पहिलो संक्रमितको रुपमा शान्ति दिदीलाई स्वा’गत गरियो ।
नियमित जस्तै आइसो’लेसनमा बिहान ६ बजे नै उठेर नित्यकर्म गर्ने गरेको उनले बताइन् । ‘मलाई चिसो लाग्न सक्छ भनेर ननुहाउनू भनेका थिए, तर बिहा’न उठेपछि कौवा स्नान गर्थें, चोखो लुगा लगाएर जप, योग ध्यान, पूजापाठ, आराधना गर्थें,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यसपछि मात्रै बरण्डा’मा ताजा हावा खान निस्कन्थें ।’
उनले आइसोले’सनको अनुभव सुनाइन्, ‘बिहान खाजाको रुपमा दूध रोटी ल्याइदिन्थे, त्यसपछि ११ बजे खाना र २ बजे नास्ता ल्याउँथे । नास्ता’मा के ल्याइदिउँ दिदी भनेर सोध्थे । म धेरै के नै खान सक्थें र ? कहिलेकाहीँ जे छ ल्याइदेऊ, धेरै नल्याइदेऊ भन्थें । कहिले उमालेको अण्डा मगाएर खान्थें । बेलुका ३ वटा रोटी, दूध र दाल खाएर सुत्थें । समय समयमा आएर औ’षधी दिन्थे ।’
उनले भनिन्, ‘कोरोना लागेको मान्छे हिँड्न त भएन, रोग अनुसारको अनुशासनमा बस्नु’पर्‍यो । स्वास्थ्य:कर्मीले भने अनुसार गर्नुपर्‍यो । मानिस सधैं अनुशासनमा बस्नुपर्छ । बरण्डामा अलि–अलि घुम्थें त्यत्ति हो ।’
मनोबल चा’हिंदो रहेछ’
अस्पतालमा बस्दा उनको अक्सिजन लेभल प्रायः सामान्य नै रहेको अस्पतालका रितेश जयसवालले जा’नकारी दिए । ‘धेरै स्वास्थ्य समस्या उहाँमा देखिएन,’ उनले भने, ‘सामान्य संक्रमितलाई जस्तै भिटामिन बी, सी, ग्याष्टि’कको औषधी र एउटा एन्टिबायोटिक चलायौं ।’
निय’मित योग ध्यान गर्ने र कुनै पनि दीर्घ रोग नभएकाले पनि कोरोना जित्न सहयोग गरेको शान्ति’को ठम्याइ छ । ‘मनोबल पनि चाहिंदो रहेछ । मनोबल भयो भने रोगले हत्पति च्याप्दैन रहेछ,’ उनले आफू निको हुनुको कारण सुनाइन्, ‘अस्पतालमा पनि राम्रो रेख’देख भयो ।’
संक्र’मित भएपछि कत्तिको डर लाग्यो भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘म एउटै विश्वासमा छु, नहुने कुरा पर्दैन, हुने कुरा टर्दै’न, मानिस बाँचिरहनुपर्छ भन्ने छैन, जाने दिन लुकेर बसे पनि जानु नै पर्छ । जन्मेपछि मर्ने हो । मलाई मर्नप’र्छ भनेर डर लाग्दैन ।’
उनलाई कोरोना संक्र’मणकै कारणले नमरुँ भन्ने मनमा रहेछ । ‘एउटा बहाना’ले मर्नुपर्छ, मरिन्छ भने मरिन्छ के गर्ने त ? तर मेरो इच्छा के थियो भने कोरोनाले नमरुँ । बरु अरु भएर मरुँ । भगवानसँग प्रार्थना थियो,’ उनले भनिन्, ‘बदनामी भइरहेको छ नि मान्छे, मान्छेदेखि मान्छेलाई घृणा छ । यो घृणाको सम’यमा नमरुँ । मेरो कल्पना त्यत्ति हो ।’
महानगर’पालिकाले सञ्चालन गरेको कोरोना अस्पतालबाट उपप्रमुख शान्ति कार्कीलाई डिस्चार्ज गर्दा स्वा’गत गर्न नगर प्रमुख विजय सरावगी आफैं पुगेका थिए । आफ्नो दृढ इच्छा शक्ति, उच्च मनोबल र अस्पतालका चिकित्स’क स्वास्थ्यकर्मीहरुको मेहनतको कारण दिदीले कोरोनालाई पराजित गर्न सफल हुनु’भएको छ,’ नगर प्रमुख सरावगीले भने, ‘एक डोज खोप लगाइसकेकोले पनि होला, खासै गाह्रो बनाउन सकेन । अस्पतालबाट सकु’शल विदाई गर्न पाउँदा ज्यादै हर्षित छु ।’
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वा’चनमा तत्कालिन संघीय समाजवादी फोरमबाट उठेका नगर प्रमुख सरावगीले भन्दा बढी मतले कांग्रेसकी शान्ति कार्की विज’यी भएकी थिइन् । सरावगीले १९ हजार ३ सय ९३ मत ल्याउँदा कार्कीले १९ हजार ६ सय ७ मत पाए:की थिइन् ।
१९८७ सालको मंसि:रमा ललितपुरको सानेपामा जन्मिएकी कार्की प्रजातन्त्र सेनानी पनि हुन् । १४/१५ वर्षको कलिलो उमेरमै परिवार छोडेर कांग्रेसको राज’नीतिमा लागेको बताउने कार्कीले पटक पटक गरेर १० वर्ष जेल जीवन बिताएकी छन् । प्रतिब’न्धित कालमा समेत कांग्रेसमा आ’वद्ध भएर राजनीति गरेकी उनी नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता विपी कोइराला, गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्ट’राईका अनुयायी हुन् । अनलाइन खबरबाट
March 21, 2021 admin समाचार 4334
March 18, 2021 admin समाचार 3933
January 2, 2021 admin समाचार 7330